दार्जिलिङ ग्राउन्ड जिरोः मोदी-ममता आए-गए, नेपालीभाषी कसका भए ? (भिडियो रिपोर्ट), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
दार्जिलिङ ग्राउन्ड जिरोः मोदी-ममता आए-गए, नेपालीभाषी कसका भए ? (भिडियो रिपोर्ट)
टेकनारायण भट्टराई/कमल साउद ।
दार्जिलिङ । 'द क्विन अफ हिल्स' अर्थात पहाडकी रानी नामले परिचित दार्जिलिङ कतिबेला हुस्सुले छोपिन्छ र खुल्छ पत्तो हुँदैन। यहाँको मौसमी अनुमान लगाउन जति कठिन छ उत्ति नै कठिन बनेको छ यहाँको चुनावी अड्कलबाजी। तापक्रम सदाकाल चिसो रहने दार्जिलिङमा यतिबेला राजनीति भने निकै गर्माएको छ, कारण हो- आउँदो अप्रिल १८ तारिख यहाँ हुने लोकसभा मतदान।
कसले कति पटक जिते
अहिलेसम्मका लोकसभा चुनावमा दार्जिलिङबाट सबैभन्दा बढी भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीले ७ पटक जित पाएको छ। त्यसपछि छ कांग्रेस, उसले ४ पटक यहाँ चुनाव जितेको छ। भारतीय जनता पार्टीले २ पटक, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले १ पटक र स्वतन्त्रले १ पटक यहाँबाट चुनाव जितेका छन्। दार्जिलिङमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा चुनावी मोर्चामा असरदार रहँदै आएको छ। तर जब असर देखाउने 'हाइ टाइम' आउँछ मोर्चामा विभाजनको रेखा कोरिन्छ। चाहे त्यो अलग्गै गोर्खाल्याण्डको मागसहितको आन्दोलन होस् वा यस्तै चुनावी सन्दर्भ। अहिले पनि मोर्चाका अग्रपंक्तिका नेता विभाजित भएर चुनावी दौडमा छन्।
पश्चिम बङ्गाल राज्य अन्तर्गत पर्ने नेपाली भाषी बाहुल्य क्षेत्रहरू दार्जिलिङ, सिलिगुडी र डुबर्स भेगमा यतिबेला भारतीय लोकसभा चुनावको सरगर्मी निकै बढेको छ।
लोकसभा चुनावको रौनक बढेसँगै नेपालीभाषी बाहुल्य यस क्षेत्रको स्थलगत परिदृश्य उतार्न डिसी नेपाल टिम दार्जिलिङ आइपुगेको छ।
मोदी-ममता पछि राहुल
नेपाली भाषी गोर्खाहरूलाई कुनै हालतमा आफ्नो कित्तामा पार्ने दाउमा छ केन्द्र सरकारको नेतृत्वकर्ता दल भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयंले यहाँका नेपाली भाषी गोर्खाहरूलाई सिलिगुडीमा आएर सम्बोधन गरेपछि यहाँ चुनावी माहोल झनझन् चर्को भएको छ। मोदीले केन्द्र सरकारले आफ्नो नेतृत्वमा विकासको गतिलाई पाँच वर्ष सफलतापूर्वक रफ्तारमा दौडाएको दावी गरे। तर पश्चिम बङ्गालमा आफ्नो दल भाजपाको सरकार नहुँदा विकास गर्न नसकेको मोदीले स्वीकार त गरे तर त्यसको कारक यहाँकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जी रहेको आरोप साँधे। यस भेगमा मुख्यमन्त्री बेनर्जी र उनको दल तृणमूल कांग्रेस विकासको अवरोधक रहेको भन्दै बङ्गालको सत्ता आफूमा सुम्पन मोदीले मतदातालाई अपिल गरे।
मोदी आएको केही दिन पछि हिजो बिहीबार दार्जिलिङ आइपुगिन् तृणमुल कांग्रेसकी प्रमुख तथा पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता। मोदी र ममताको चुनावी सभा र भाषणमार्फत दुवैका आपसी घोचपेच हेर्न र सुन्न लायक थिए। चर्चा के पनि छ मोदी र ममता पछि कांग्रेस आइको माहोल बनाउन राहुल गान्धी पनि दार्जिलिङ आउँदैछन्।
भाजपा र तृणमूल कांग्रेसको टक्कर
भाजपाबाट दार्जिलिङ जिल्लाका लागि उम्मेदवार राजु विष्ट छन् भने टीएमसी अर्थात त्रृणमूल कांग्रेसबाट अमरसिंह राई चुनावी मैदानमा छन्। यी दुईबीच यहाँ मुख्य भिडन्त निश्चित छ।
लोकसभाको एक सिटका लागि दार्जिलिङमा प्रधानमन्त्री मोदीको भाजपासँग ठिक टक्करमा चुनावी मैदानमा छ बङ्गालकी दिदी नामले परिचित मुख्यमन्त्री ममताको दल त्रृणमूल कांग्रेस। हो यतिबेला १७ लाख नेपाली भाषी फकाउन मोदी र ममताको चर्को कसरत चलिरहेको छ।
ममता दिदीले पश्चिम बङ्गालमा शासन त गरिन् तर अघिल्ला लगातार २ वटा लोकसभा निर्वाचनमा दार्जिलिङलाई भारतीय जनता पार्टीले कब्जामा लियो। केन्द्र सरकार नेतृत्व गरेको दल भाजपाका विजयी उम्मेद्वार भएर पनि राज्य सरकार त्रृणमूल कांग्रेसको कब्जामा भएका कारण काम गर्ने वातावरण नमिलेको भन्दै मोदीले पश्चिम बङ्गालमा भाजपा सरकार स्थापित गर्न यहाँका मतदातासँग अपिल गरेका छन्। मोदीले त ममता बेनर्जीलाई पश्चिम बङ्गालको विकासको गति रोक्ने 'स्पीड ब्रेकर' नै भनिदिए।
सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहेको दल भाजपाले दार्जिलिङ र सिक्किम क्षेत्रका नेपालीभाषी फकाउनकै लागि भारतीय गोर्खा अन्तर्गतका ११ जातिलाई जनजातिको मान्यता दिलाउने चुनावी घोषणा गरेर माहोल आफूतिर तानेको छ।
बिहीबारको चुनावी सभामा ममताले भनिन्, भाजपाले दार्जिलिङमा जितेर के गर्यो? भनेर प्रश्न गरिन् र भाजपा दार्जिलिङमा फर्केर पनि आएनन् भन्ने आरोप लगाइन्।
आज बिहीबारबाट लोकसभा चुनावको पहिलो चरणको मतदान सुरु भएको छ। दोस्रो चरणको मतदान अन्तर्गत दार्जिलिङमा आउँदो १८ तारिख मतदान हुनेछ। यहाँको स्थलगत चुनावी माहोल उतार्न डिसी नेपाल टिम प्रयत्नरत छ।
दार्जिलिङमा चुनावी माहोल उतारिएको यो ग्राउन्ड जिरो भिडियो रिपोर्ट हेर्नुस्ः